OVERSEAS KACHIN ASSOCIATION: July 2012
5 consequences from the drought that’s scorching American farmland
National Affairs: July 31, 2012
Drought-damaged corn onaMichigan farm. (Robert Ray/AP)
Posted by OVERSEAS KACHIN ASSOCIATION at 5:38 PM No comments:
31 July 2012 01:27 (South Africa)
Built in secret byaparanoid military junta, and kept that way ever since, Naypyidaw remains an enigma. The city might be Myanmar’s capital, but few foreigners have ever been permitted access to its tightly-guarded, tank-friendly streets. Until recently. SIMON ALLISON reports onasurreal visit to the heart of the regime.
NAYPYIDAW, MYANMAR – It is the stuff of spy thrillers. Deep in the tropical jungle,aparanoid military dictatorship pours billions of dollars and man-hours into the construction ofasecret city,amodern fortress from which to rule their long-suffering subjects. The roads, it is rumoured, were designed for tanks rather than cars. The hills are riddled with bunkers and arms caches. Everything is connected by underground tunnels, and any details about the city, even the fact of its existence, zealously guarded.
Built on hill, the base of the pagoda provides the best view over the city. Or it would, if the sun were shining and the air clear. Through the rain and mist, I couldn’t see more thanafew hundred metres in front of me. I couldn’t really see the city – it looked like there was nothing there at all. Which, for this strange and unlikely place, seemed perfectly appropriate. DM
Photo: Naypyidaw by Simon Allison/Daily Maverick
Posted by OVERSEAS KACHIN ASSOCIATION at 3:57 PM No comments:
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု မြင့်မားနေခြင်းသည် အနောက်နိုင်ငံများ၏ စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့ထားခြင်း (Sanction) ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ စစ်ခေါင်းဆောင်များက ဝေဖန်တတ်လေ့ ရှိပါတယ်။
ဆိုင်သလား၊ မဆိုင်ဘူးလား ဆိုတာ ကြည့်ကြရအောင်ပါ။ စင်ကာပူ အခြေစိုက် VRIENS & PARTNERS အဖွဲ့ဟာ နိုင်ငံတကာ စီးပွားရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှာ စီမံခန့်ခွဲမှု စိတ်ချရတဲ့ အစိုးရကောင်း (good governance) အဆင့် သတ်မှတ် ပေးလေ့ရှိပါတယ်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်အတွက် အာရှ-ပစိဖိတ်ဒေသ နိုင်ငံ ၁၉ နိုင်ငံ ကို မဏ္ဍိုင် ၆ ခု (Six Pillars) နဲ့ တိုင်းတာပြီး အဆင့်သတ်မှတ်ရာမှာတော့ မြန်မာနိုင်ငံ က အားလုံးရဲ့ အောက်ဆုံးအဆင့် ၁၉ ဆွဲပါတယ်။ Laos နိုင်ငံတောင် မြန်မာနိုင်ငံအဆင့်ရဲ့ အပေါ်မှာ ပါ။ အံ့သြဖို့ကောင်း တာက စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့တာနဲ့ လားလားမျှ မဆိုင်တာ တွေ့ရပါတယ်။ Sanction မလုပ်ထားတဲ့ အာရှနိုင်ငံ တွေလည်း ဘာဖြစ်လို့ မလာသလဲဆိုတော့ အခုအောက်မှာ ဖော်ပြပါ အချက် အလက်တွေကို ကြည့်ပြီး ကြောက်လို့ မလာတာ ပိုများပါသတဲ့။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေဟာ အစိုးရ ကောင်းအဆင့် သတ်မှတ်ချက်မှာ မူတည်ပြီး စိတ်ချရတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာ သူတို့ငွေတွေကို ဖြုန်းတတ် လေ့ရှိပါတယ်။ အစိုးရအနေနဲ့ အောက်ဖော် ပြပါ အရေးကြီး ကဏ္ဍတွေမှာတောင် စည်းကမ်းမရှိရင် တော့ ဘယ်လုပ်ငန်းရှင်မှ ရေရှည်အတွက် စဉ်းစား မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ သယံဇာတ နှိုက်ယူမယ့် လုပ်ငန်း ရှင် အပေါစားတွေလောက်ပဲ လာမှာပါ။
“မြန်မာနိုင်ငံကို လာတဲ့ နိုင်ငံတကာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေ စိတ်အဆင်းရဲဆုံးမှာ အခွန် ဘယ်မှာ ဆောင်ရမလဲ ဆိုတဲ့အချက် ဖြစ်ပါသတဲ့။ လမ်းကြောရှင်းတဲ့ကိစ္စ သူတို့ နားမလည်ပါ။ ၀န်ကြီး အိမ်မှာလား၊ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာလား၊ ၀ါးတားဂိတ် (၀ါးလုံးနဲ့ တားပြီးတောင်းတဲ့ ဂိတ်တွေ) မှာ ဆောင်ရင် ပြီးတာလား၊ ဘယ်တော့ ဆောင်ရမလဲ၊ ဘယ်လောက် ဆောင်ရ မလဲ၊ ဘယ်ရုံး များ သွားရမလဲ၊ တခါ ဆောင်ပြီးရင် ပြီးပြီလား။ ဘာမှ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မရှိတဲ့ နေရာမှာ အခွန်ဆောင်မယ့်ကိစ္စသည် သူတို့လုပ်ငန်းကို စီမံခန့်ခွဲတာထက် ပိုခက်တယ်တဲ့။”
ဗိုလ်ချုပ်တွေနဲ့ နီးစပ်တဲ့ အသိုင်းအ၀ိုင်းလောက်က ဘယ်အချိန်၊ ဘာတင်ပို့မှန်းလဲ မသိ၊ ပြည်သူ အများပိုင်းက ဘယ်သူ့ကို လျှောက်လွှာတင်ရမှန်းမသိ၊ ဘယ်ဌာန အရေးကြီးမှန်းလဲ မသိ၊ ဘယ်နေ့ ဘာလုပ်ပိုင်ခွင့် ချပေးမှန်းလဲ မသိ။ ဘာတင်သွင်းခွင့်ရှိမှန်းလဲ မသိ။ အများသိအောင်လဲ မကြေညာ။ ဖုံးဖုံးဖိဖိနဲ့ လုပ်စားနေတဲ့ အုပ်စုသာလျှင် ရှိသမျှ လုပ်ပိုင်ခွင့် အားလုံးသိမ်းကျုံးယူလိုက်မှ ... အော် ... သူက ကားပါမစ်၊ ဟော ... နောက်တယောက်က ကိုယ့်ရဲ့ဘိုးဘွားပိုင် ခြံမြေယာမြေရဲ့ ပိုင်ရှင်ဖြစ်သွား၊ ဟိုအဖွဲ့က ရှိရှိသမျှ သယံဇာတအားလုံး ပိုင်သတော်မူသော အရှင်သခင်ဖြစ်သွား၊ ဒီအဖွဲ့ က ထွက်ကုန် အားလုံးရဲ့ သခင်ဖြစ်သွား ... ဆိုတာမျိုးတွေပေါ့။ အခုလည်း ဒေါ်စု ပြောနေပြီ။ ရခိုင်ကမ်းလွန် သဘာဝဓာတ်ငွေ့နဲ့ ရေနံ တင်ပို့ရောင်းချမှုမှာ ထင်သာမြင်သာ မရှိဘူးတဲ့လေ။ ဘယ်သူတွေ ဘာလုပ် နေမှန်းလဲ မသိ။ အစိုးရက ဘယ်လောက်ပိုင်မှန်းလဲ မသိ။ အစုရှယ်ယာ ဘယ်သူ ဘယ်လောက် ရမှန်းလဲ မသိ။ အစုရှယ်ယာကို ပြည်သူတွေ ၀ယ်ပိုင်ခွင့် ရှိမှန်း၊ မရှိမှန်း မသိ။ ၀န်ကြီးအဖွဲ့နဲ့ ပြီးတာ လား၊ လွတ်တော်မှာ တရားဝင် ဆုံးဖြတ်ပြီး လုပ်တာလား။ ဘာမှမသိ။ နိုင်ငံ့အလယ်ဗဟိုတည့်တည့် ပိုင်းပြီး ပိုက်လုံးတန်းကြီး ကတော့ ပြီးခါနီးပြီ။
(၃) နိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်မှု (Political Stability)
သိတဲ့အတိုင်း လွတ်လပ်ရေး ရကတည်းက ဖြစ်နေတဲ့ ပြည်တွင်းစစ်တွေ၊ လုံခြုံစိတ်ချရမှု မရှိ။
(၄) အခွန်စည်းကြပ်မှု (Taxation)
မြန်မာနိုင်ငံကို လာတဲ့ နိုင်ငံတကာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေ စိတ်အဆင်းရဲဆုံးမှာ အခွန် ဘယ်မှာဆောင် ရမလဲ ဆိုတဲ့အချက် ဖြစ်ပါသတဲ့။ လမ်းကြောရှင်းတဲ့ကိစ္စ သူတို့ နားမလည်ပါ။ ၀န်ကြီးအိမ်မှာလား၊ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာလား၊ ၀ါးတားဂိတ် (၀ါးလုံးနဲ့ တားပြီးတောင်းတဲ့ ဂိတ်တွေ) မှာ ဆောင်ရင် ပြီးတာလား၊ ဘယ်တော့ ဆောင်ရမလဲ၊ ဘယ်လောက် ဆောင်ရမလဲ၊ ဘယ်ရုံးများ သွားရမလဲ၊ တခါ ဆောင်ပြီးရင် ပြီးပြီလား။ ဘာမှ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မရှိတဲ့ နေရာမှာ အခွန်ဆောင်မယ့်ကိစ္စသည် သူတို့လုပ်ငန်းကို စီမံခန့်ခွဲတာထက် ပိုခက်တယ်တဲ့။
(၅) အဂတိလိုက်စာမှု (corruption)
ဒီအကြောင်းကတော့ အားလုံးသိတဲ့အတိုင်း နိုင်ငံတကာ စံတင်ထားတဲ့အကြောင်းမို့လို့ ထူးထူး ထွေထွေ ပြောစရာလိုမယ် မထင်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဝန်ထမ်း (စစ်ဗိုလ်အပါအ၀င်) များ၏ သားသမီးများ စင်ကာပူကျောင်းတွေမှာ၊ International School တွေမှာ၊ တလ ဆယ်သိန်းအထက် အကုန်ခံ နိုင်တယ်ဆိုတော့ မိုးပေါ်က ကျလာတဲ့ ငွေတော့ မဟုတ်လောက်ပါ။
(၆) ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှု (Fiscal & Monetary Administration)
မြန်မာပြည်သူတွေ စိတ်အဆင်းရဲဆုံးကတော့ တလိမ့်လိမ့်တက်နေတဲ့ ကုန်ဈေးနှုန်းပါ။ ပြည်သူတွေက ကုန်ဈေးတက်တယ်လို့ပဲ မြင်တတ်တာလေ။ အစိုးရက ကျပ်ငွေလိုတိုင်း စာရွက် လိမ့်လိမ့်ထုတ်ပြီး ပြည်သူတွေမှာ ရှိနေတဲ့ ကျပ်ငွေတန်ဖိုး ကျကျသွားတာ မသိကြပါ။ အစိုးရက ပြည်သူတွေဆီက လုပ်အားတန်ဖိုး ညစ်ယူတဲ့ သဘောပါ။ သိတဲ့ လူတွေကတော့ ရွှေဝယ်စုပေါ့။ အခုလည်း ပြည်သူ တွေမှာ တကယ်လိုအပ်နေတာ ငွေအကြွေ၊ အစိုးရထုတ်တာ ကျပ် တသောင်းတန်။ ဒီတော့ ကျပ်ငွေ တန်ဖိုး လိမ့်ဆင်းနေပြီပဲ မဟုတ်လား။ ပြည်သူများကို ထင်သာမြင်သာ ချပြလေ့မရှိ၊ လိုသလောက် လိမ့်ထုတ်နေတဲ့ ငွေစက္ကူသည် ဖောင်းပွချင်သလောက် ဖောင်းပွနေတာ၊ နောက်နောင်လည်း ဘယ် ဂဏန်းထိ ထိုးတက်ဦးမည်မသိပါ။
ဒီလောက်အရေးကြီးတဲ့ အခန်းကဏ္ဍ အဲလိုကြီးဖြစ်နေရင်တော့ ဘယ်နှလပိန်းတုံး လုပ်ငန်းရှင်တွေက လာရဲတော့မလဲ။ သန်း ၆၀ ရှိတဲ့ ပြည်သူတွေကိုလည်း ဘယ်လို စီမံခန့်ခွဲနိုင်တော့မလဲ ...။
ဆင်းရဲမွဲတေမှု လျှော့ချရေး (Poverty Reduction) နဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ အစိုးရ (good governance) ဖြစ်အောင် လုပ်မယ်ဆိုပြီး မိန့်ခွန်းပြောနေတဲ့ သမ္မတကြီးအနေနဲ့ တကယ်တမ်း အပြောနဲ့အလုပ် ညီပါရဲ့လားဆိုတာ တိုင်းတာကြည့်ဖို့ တင်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
Duwa Kachin FB မှပြန်လည်ဖေါ်ပြပါသည်။
Posted by OVERSEAS KACHIN ASSOCIATION at 10:15 AM No comments:
Saturday, 28 July 2012 14:24
“ ကျနော်တို့က အစိုးရနဲ့ သဘောတူထားတဲ့ အတိုင်း ကာယကံရှင်များနှင့် တိုက်ရိုက် အကူအညီပေး နေပါတယ်။ တကယ့်လိုချင်တာက အနီးကပ် ကူညီသွားတဲ့သဘောပါ” ဟု Ashley ကဆိုပါသည်။
(ရှင်းလင်းပွဲကို တွေ့ရစဉ် (ဓါတ်ပုံ - ရွှေဟင်္သာသတင်းဌာန)
Posted by OVERSEAS KACHIN ASSOCIATION at 6:44 AM No comments:
တိုင်းပြည်ကို အုပ်ချုပ်တဲ့နေ၇ာမှာ အစိုး၇အဆက်ဆက် သေနတ်မပါဘဲ မအုပ်ချုပ်တတ်တာ ဟာ ကမ္ဘာ့အဆင်း၇ဲဆုံးနိုင်ငံကို ထိုးဆင်းခဲ့ပြီးပြီ။
ကျောင်းသားအေ၇း ဖြေရှင်းနည်းက …. ၈၈၈၈ ဆိုတာ သမိုင်းမှာ ထင်းထင်းကြီး။
ဒီမိုကေ၇စီ မ၇မကကြွေးကြော်သူတွေကို သွေးပျက်သွားအောင် ဖြေရှင်းခဲ့တဲ့ “ ဒီပဲယင်းလုပ်ကြံမှုကြီး” ဒါကိုလည်းဘယ်သူမှမကိုင်၇ဲသေးဘူး။
အခု ရိုဟင်ဂျာကိစ္စ ၇ခိုင်နဲ့ တေ့ပေးလိုက်ပြန်တယ်။
UNHCR လူကြီးလာတော့ ရိုဟင်ဂျာ တွေကို ဒုက္ခသည်စခန်းဖွင့်ပြီး ဗမာပြည်ကနေ ခေါ်ထုတ်သွားပါတဲ့။ ဒါ လုံချည်ဝတ် General ကိုယ်တိုင်ပြောတဲ့စကား။
ဗမာမင်းနိုင်ငံ တည်ခဲ့တဲ့ မန္တလေးမြို့ ကိုဝယ်ပြီး ဗမာကို နဖါးကြိုးကိုင်နေတဲ့ ပြည်ကြီးပေါက်ဖေါ် တွေကိုေ၇ာ အဲဒီစကားမျိုး ထွက်နိုင်ပါ့မလား?။ ဒီ၂ယောက်က အတူတူ ဘဲလေ။
ကချင်စစ်ပွဲ မ၇ပ်နိုင်တာ … ဘယ်မှာအကွက်ဆန်းတွေပါလို့ လဲ?.. အနစ် ၅၀ ကျော်အတော မသတ် နိုင်ဘဲ ပြည်သူကို မြန်မာကေ၇စီ နဲ့ အတင်းမောင်းနေ၇င်..နဂိုကမှချိနဲ့ နဲ့ ..ကင်ဆာေ၇ာဂါ ပါေ၇ာသွား လိမ္မယ်။
ထိန်နန် ဇော်တူး (ကချင်ကြီး)
Posted by OVERSEAS KACHIN ASSOCIATION at 6:51 PM No comments:
Posted by OVERSEAS KACHIN ASSOCIATION at 5:18 PM No comments:
Our short film, Ongoing impunity: Atrocities Against the Kachin People, documents interviews with villagers who have suffered human rights violations by the Burma Army during the continuing war against Kachin.
By AP News Jul 22, 2012 7:30PM UTC
GAUHATI, India (AP) — India’s army moved in to stop armed clashes over land between settlers and local villagers that have killed at least 11 people in India’s remote northeast over the past two days, police said Sunday.
Animosity and accusations of land-stealing have long simmered between Bodos and the thousands of mostly Bengali Muslim settlers, many of whom came from the former East Pakistan before it became Bangladesh in 1971. The two groups have clashed sporadically since 1990s and burned each other’s homes and property, state officials said.
Posted by OVERSEAS KACHIN ASSOCIATION at 1:55 PM No comments:
ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး အကျိုးခံစားရသူများနှင့် မခံစားရသူများ
ဇူလိုင် ၂၂၊ ၂၀၁၂
ပြီးခဲ့တဲ့ ၁ နှစ်ခွဲတာကာလလုံးလုံး ဦးသိန်းစိန် ခေါင်းဆောင်တဲ့ မြန်မာအစိုးရသစ်ရဲ့ ပြုပြင် ပြောင်းလဲရေး ဆိုတာကို မြန်မာပြည်တွင်းကသာမက နိုင်ငံတကာ ကပါ စိတ်ဝင်စားနေခဲ့ကြပါတယ်။
ပြည်တွင်းက ပြည်သူတွေအဖို့ မြန်မာပြည်ကြီး ပြောင်းလဲနေပြီ ရှေ့ကိုရွေ့နေပြီလို့ အပြင်က သူတွေ ပြောတော့မှ မြန်မာပြည်ထဲနေသူတွေက ကိုယ့်ဟာကိုယ် ပြန်ကြည့်ပြီး ဒါကိုရွေ့နေတယ် ခေါ်တာလားလို့ မှတ်ယူလိုက်ရသူတွေလည်း မြန်မာနိုင်ငံမှာ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်နေပြီ ခေတ်ပြောင်းနေပြီ စနစ်ပြောင်းနေပြီဆိုတာ သတင်းစာမှာ၊ ဂျာနယ်မှာ ဖတ်ရပေမယ့် ကိုယ် တကယ်လက်တွေ့ဆက်ဆံနေရတဲ့ အာဏာပိုင်တွေ၊ လူနေမှုဘ၀တွေက မပြောင်းလဲသေးလို့ပဲ ဖြစ်ပါ တယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူဦးရေရဲ့ အများစုဖြစ်တဲ့လယ်သမား လူတန်းစား၊ အလုပ်သမားတွေ၊ ၀န်ထမ်းတွေ၊ ပုဂ္ဂလိက လခစား ၀န်ထမ်းတွေအများစုရဲ့ နေမှုထိုင်မှုဘ၀တွေ အလုပ်အကိုင် အခွင့် အလမ်းတွေ သိသိ သာသာ တိုးတက်မလာသေးပါဘူး။
လယ်သမားတွေ အဖို့ အခုချိန်ထိ လုပ်ကိုင်နေတဲ့ လယ်တွေသိမ်းခံနေရဆဲပါ။ အချို့က အရင်သိမ်းထားရ တဲ့ ကိစ္စတွေ အတွက် သမ္မတကြီးထံကို လိပ်မူပြီး စာရေးတင်ပြနေရဆဲဖြစ်သလို အလုပ်သမားတွေ အဖို့ လည်း အလုပ်ခွင်အခြေအနေတိုးတက်လာဖို့ လုပ်ခတိုးတက်လာဖို့ အလုပ် အကိုင် အခွင့်အလမ်းပိုရလာဖို့ တောင်းဆိုနေရဆဲပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အရင်ကဆို အလုပ်သမား အခွင့်အရေးလို့ ဆိုလိုက်တာနဲ့ လုံထိန်းကားတွေ အရပ်ဝတ် စုံထောက်တွေ စက်ရုံ အလုပ်ရုံရှေ့ရောက်လာတဲ့ အခြေအနေကနေ အခုတော့ လုံထိန်းကား အစား အလုပ်သမား အရေး ဆောင်ရွက်သူတွေနဲ့ မီဒီယာတွေရောက်လာတာကို ပြောင်းလဲတိုးတက်မှုလို့ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ရင်တော့ ပြောင်းလဲတယ် ဆိုရမယ် ထင်ပါတယ်။
အလားတူ လယ်သမားတွေအဖို့လည်း အခုဆိုရင် သိမ်းခံရတဲ့ လယ်မြေတွေအတွက် ရန်ကုန် မြို့ မြို့ရွာ အိုးအိမ်ဦးစီးဋ္ဌာနရှေ့မှာ ထိုင်သပိတ် ဆန္ဒပြခွင့်ရှိလာတာကို တိုးတက်မှုလို့ ပြောမယ်ဆို ပြောကြပါလိမ့်မယ်။ တကယ်တန်း လယ်သမားတွေအတွက် မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု ဥပဒေ ခိုင်ခိုင်မာမာ မရှိသေးတာ၊ စပါးဈေး ကျလို့ ချေးထားတဲ့ ကြွေးတွေ ကြေအောင်မဆပ်နိုင်တဲ့ အခြေအနေမျိုးတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရတာကြောင့် လယ်သမားတွေရဲ့ဘ၀ ဒုံရင်းကနေ မတက်သေးပါဘူး။
ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံအချို့မှာလို လယ်သမားတွေ အတွက် အစိုးရအနေနဲ့ မျိုးကောင်း မျိုးသန့်၊ အထောက် အပံ့ပေးဖို့ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး ပေါ်လစီ မှန်မှန်ကန်ကန် ချဖို့ စတာတွေကို တောင်းဆိုရ ကောင်းမှန်း မြန်မာနိုင်ငံက လယ်သမားတွေ မသိကြသေးပါဘူး။ ကိုယ့်လယ်မြေ အသိမ်းမခံရအောင်၊ သိမ်းခံရတာတွေ ပြန်ရအောင် တောင်းဆိုတဲ့ အဆင့်ပဲရှိပါသေးတယ်။
လုပ်ရလွယ်တဲ့ ပြုပြင်မှု၊ လုပ်သင့်တဲ့ ပြုပြင်မှု
ထင်သာမြင်သာရှိတဲ့ နိုင်ငံရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ ဖြစ်တဲ့ အတိုက်အခံကို လွှတ်တော်ထဲ ရောက်အောင် စီစဉ်တာ၊ နကိုက မိုးထိနေတဲ့ကားဈေး ကျဆင်းသွားအောင် ဖြေလျော့တဲ့ စီးပွားရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲ မှုလိုမျိုးတွေက လုပ်ရလွယ်ပေမယ့် ပညာရေးလို လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍလို ကိစ္စရပ်တွေမှာ လုပ်ရခက်ခဲသလို အခုချိန်ထိ ထိထိရောက်ရောက် မဆောင်ရွက်နိုင်သေးတာလည်း တွေ့ရပါတယ်။
ပညာရေးမှာ ကျူရှင်ချည်း အားကိုးနေရတဲ့ ပညာရေး စနစ်တွေပြင်ဆင်ပေးဖို့၊ စာမတတ်တဲ့ အဝေးသင် စနစ်တွေ ပြင်ဆင်ဖို့၊ အရည်အချင်းရှိတဲ့ ဆရာတွေဖြစ်ဖို့ အစရှိတဲ့ လုပ်ဆောင်သင့်တဲ့ ပြောင်းလဲမှု အများအပြားကို ကျောင်းသားတွေနဲ့ သူတို့ရဲ့မိဘတွေက ငံ့လင့်နေကြပါတယ်။
တိုင်းရင်းသား ဒေသတွေမှာတော့ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးရေးက ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ဆိုတာကို မှတ်ကျောက် တင်မယ့် အချက် ၂ ချက်ပါ။ ရေရှည်တည်တံ့မယ့် ငြိမ်းချမ်းရေးရှိမှသာပဲ ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုး ရေး ဖေါ်ဆောင် နိုင်မှာပါ။ နို့မဟုတ်ရင်တော့ တိုင်းရင်းသားဒေသများမှသယံဇာတ ထုတ်ဖေါ်တဲ့ ဖွံ့ဖြိုးရေး မျိုးပဲ ဖြစ်ပြီး ဒေသခံတွေ အားလုံး အကျိုးခံစားရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
၉၀ ကျော် ခုနှစ်တွေတုန်းက ဦးခင်ညွန့်လုပ်ခဲ့သလို တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့တွေ လက်နက် ဆက်ကိုင်ခွင့်ပေးပြီး မြို့ပေါ်ရောက်လာရုံနဲ့ ရေရှည်တည်တံ့မယ့် ငြိမ်းချမ်းရေး မဖေါ်ဆောင် နိုင်သလို ဖွံ့ဖြိုးရေးလည်း မလုပ်ဆောင်နိုင်ပါဘူး။ အဲဒီကာလရဲ့ သင်ခန်းစာကို ယခုတကြိမ်မှာ ယူကြမှ နိုင်ငံရေးအရ ဆွေးနွေးမှု၊ ဖြေရှင်းမှုတွေဆီ ဦးတည်သွားနိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ရပါတယ်။
နိုင်ငံရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုနဲ့ စီးပွားရေး ဖြေလျှော့မှု၊ ဆိုတာကြောင့် ဥရောပနဲ့ အနောက်နိုင်ငံ အချို့က ပိတ်ဆို့မှုတွေကို ယာယီအားဖြင့် ဒါမှမဟုတ် အပြီးတိုင် ဖယ်ရှားပေးတာတွေရှိလာပါပြီ၊ ဘဏ္ဍာရေး ဆိုင်ရာ တားမြစ်မှုတွေ အတော်လေး လျော့ပေါ့လာတာကြောင့် နိုင်ငံတကာနဲ့ ဆက်သွယ် တဲ့ လုပ်ငန်းရှင်တွေ အထိုက်အလျှောက် အကျိုးခံစား နေရပါပြီ။
နိုင်ငံခြားငွေကြေးလဲနှုန်း တမျိုးထည်းဖြစ်အောင် သတ်မှတ်ဖို့ ကြိုးစားတာ၊ ပုဂ္ဂလိကဘဏ် တွေကို နိုင်ငံခြား ငွေစာရင်းဖွင့်ခွင့်ပေးတာတွေကြောင့် ပြည်တွင်း စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်တွေအဖို့ အနည်းငယ် လွယ်ကူ လာတဲ့ အခြေအနေတချို့ ရှိလာပါတယ်။
၁၀ စုနှစ်နှစ်ကာလ တခုကျော် သဘာဝမကျတဲ့ကားဈေးကြီးမြင့်မှုကို တနှစ်အတွင်း ဈေးခေါက်ချိုးအောက် ရောက်အောင် စီးပွားကူးသန်းနဲ့ ကညနတို့က ကန့်သတ်ချက်တွေ ပယ်ဖျက်ခဲ့ ပါတယ်။ မြန်မာ့စီးပွားရေး ဦးပိုင်နဲ့ လုပ်ငန်းရှင်ကြီးတချို့သာ ရတဲ့ ကားပါမစ်ကို ဖြေလျော့လိုက်တာ လုပ်သင့်တဲ့ လုပ်ရပ်တခုအဖြစ် အများက ကြိုဆိုကြပါတယ်။
ကားပါမစ် ဖြေလျော့တာလိုမျိုး မိုဘိုင်း တယ်လီဖုန်း လိုင်းတွေ ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီတွေကို လွပ်လပ်စွာ လုပ်ကိုင်ခွင့် ပေးဖို့ လိုအပ်နေတာကိုလည်း ထောက်ပြနေကြပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ ကား၊ မိုဘိုင်းဖုန်း နိုင်ငံတကာနဲ့ နှိုင်းရင် မဖြစ်သင့်တဲ့ ဈေးဖြစ်နေတာက ဆယ်စုနှစ်တခုကျော်လာပါပြီ၊ မိုဘိုင်းဆင်းကဒ် တကဒ် ကျပ် ၃၊ ၄ ၊ ၅ထောင်နဲ့ ရောင်းနိုင်အောင်၊ တမိနစ်ပြောခ ယခုထက် သက်သာအောင် လွပ်လပ်စွာ ပြိုင်ဆိုင်ခွင့် ပြုမှဖြစ်မှာပါ။
ဆက်သွယ်ရေး ၀န်ကြီးဋ္ဌာနနဲ့ အစိုးရနီးစပ်သူ ကုမ္ပဏီကြီးတွေ လက်ဝါးကြီးအုပ်ထားတဲ့ အခြေအနေ ကြောင့် နယ်က သူတွေ၊ မြို့ပေါ်က လက်လုပ်လက်စားတွေ ဖုန်းမကိုင်နိုင်ကြသေးပါဘူး။ ခေတ်သစ်စီးပွား ရေး မှာ မိုဘိုင်းဖုန်းဟာ အလွန်အရေးပါသလို အများကြီးလည်း အထောက်အကူ ပြုနိုင်ပါတယ်။ ပညာနဲ့ အသက်မွေးသူက စလို့ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး နဲ့ အသက်မွေးသူအဆုံး မိုဘိုင်း အင်တာနက် နည်းပညာရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးကို အနည်းနဲ့အများ သက်ဆိုင်ခံစားကြရပါတယ်။
ခေတ်ပြောင်း စနစ်ပြောင်းတဲ့ရလဒ်ကို လူတိုင်း ထိတွေ့ခံစားစေချင်ရင် မိုဘိုင်းဖုန်းကို ဈေးနှုန်း အသက်သာ ဆုံးနဲ့ သုံးနိုင်အောင် အစိုးရက လုပ်ဆောင်ရမှာပါ။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းတွေ ဖန်တီးမယ့် စက်ရုံတွေ၊ အလုပ်ရုံတွေက နေ့ချင်း အကောင်အထည် မပေါ်လာနိုင် ပေမယ့် မိုဘိုင်း ဆက်သွယ်မှု နည်းပညာဆိုတာက နေ့ချင်းညချင်း အကောင်အထည်ဖေါ်လို့ ရပါတယ်။
ဒါကြောင့် ငါးထောင်တန် ဆင်းကဒ်ဆိုတဲ့ လှုပ်ရှားမှုနဲ့ ဂယက်ဟာ စိတ်ကူးယဉ်မှု သက်သက် မဟုတ်ပါဘူး၊ ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီတခုအနေနဲ့ လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာကို ဖွင့်ချပြလိုက်သလို ဒီရလဒ်ဟာ လူထု မျှော်လင့်တဲ့ အပြောင်းအလဲဆိုတာတွေထဲက တခုဆိုတာ ဖေါ်ပြလိုက်တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသံကို နိုင်ငံ အုပ်ချုပ် တဲ့ အစိုးရ အနေနဲ့ ကြည့်မြင်နားလည်တတ်ရင် လူထုရဲ့ ဆန္ဒ၊ မျှော်လင့်ချက် ကို အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်နိုင် ပါလိမ့်မယ်။
ဈေးသက်သာတဲ့ မိုဘိုင်းဖုန်း ဖြစ်မြောက်ရေးဟာ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရ အနေနဲ့ ဘယ်လောက်ထိ ပြုပြင်လွယ် သလဲ၊ အစိုးရနဲ့ ပေါင်းပြီး ကြီးပွားချမ်းသာနေတဲ့ လုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေရဲ့ နှောင်ကြိုးကို ဘယ်လောက် ဖြတ်တောက်နိုင်သလဲ ဆိုတဲ့ အချက်ကိုလည်း မှတ်ကျောက်တင်မယ့် ကိစ္စတရပ် ဖြစ်ပါတယ်။
သတင်းမီဒီယာတွေ အထိုက်အလျောက် လွတ်လပ်ခွင့်ပေးလာတဲ့ အခြေအနေကြောင့် ပြည်ပအခြေစိုက် သတင်းဋ္ဌာနတချို့ ပြည်တွင်း ပြန်ဝင်ပြီး လုပ်ကိုင်နိုင်လာပါတယ်။ ပြည်တွင်း ဂျာနယ် တွေ ယခင်ရေးသား ခွင့်မရှိတဲ့ အကြောင်းအရာတွေ ရေးသား လာနိုင်ပါတယ်။
လက်နက်ကိုင် တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့တွေဆီသွားရောက်ပြီး သတင်းယူရေးသား ဖေါ်ပြလာတာ တွေ ရှိလာပါ တယ်။ ဖေါ်ပြရာမှာ ဝေဘန်ဆန်းစစ်မှု အရေးအသားတွေ ပြည့်ပြည့်၀၀ ဖေါ်ပြနိုင်တဲ့ လွတ်လပ်မှုတော့ မရှိသေးတာ အမှန်ပါ။
နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်း၊ အရပ်ဘက် လူမှု အဖွဲ့အစည်းတွေ စုဝေးကာ အထိမ်းအမှတ် အခမ်း အနားတွေ လုပ်ဆောင်လာနိုင်တာတွေက ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုရဲ့ ရလဒ်လို့ပြောရင် ပြောနိုင်ပါတယ်။ အရင်က ဓါးမိုး အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ ခေတ်ကနေ အသက်ရှုနည်းနည်းချောင်လာတာက ဒီမိုကရေစီရပြီလို့ မဆိုနိုင်သေးပါဘူး။ လှုပ်သာ လူးသာရှိလာတယ်လို့သာ ဆိုရမယ်ထင်ပါတယ်။
လတ်တလော မီဒီယာ ဖြေလျော့မှု နိုင်ငံရေး ဖြေလျော့မှုတွေကနေ လူတွေအားလုံး ခံစား ထိတွေ့နိုင်တဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုမျိုး ၀ိုင်းဝန်းလုပ်ဆောင်ကြရဦးမှာပါ။ အုပ်ချုပ်ရေး အာဏာပိုင်တွေရဲ့ လာဘ်စားမှုတွေ၊ တရားစီရင်ရေးဋ္ဌာနရဲ့ လာဘ်စားမှုတွေ၊ တပ်မတော်က လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှု တွေ ထောက်ပြ ဝေဘန်ပြောဆိုခွင့်ရှိလာပါပြီလား။
ဗိုလ်ချုပ်တွေ ၀န်ကြီးတွေရဲ့ ကိုယ်ကျိုးစီးပွားတွေ တရားဥပဒေနဲ့ ညီမညီ၊ ကန်ထရိုက်ချ ပေးတာ၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်ချပေးရာမှာ ပွင်းလင်းမြင်သာမှု မရှိတာ၊ ခြစားတာ အာဏာအလွဲသုံးမှုတွေကို မီဒီယာက ဖေါ်ထုတ် ဝေဖန်ခွင့်ရှိပါပြီလား။
အဲဒီအချက်တွေ မရှိသေးရင် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု၊ မြန်မာပြည်ရွှေ့နေပြီဆိုတာ အမှန်တကယ် ဖြစ်ပျက်နေတာ ပါလို့ ယုံကြည်ဖို့ ခက်ခဲနေရဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။
MoeMaka Blog မှပြန်လည်ဖေါ်ပြပါသည်။
Posted by OVERSEAS KACHIN ASSOCIATION at 8:03 AM No comments:
Myanmar Times: KIA ၏ ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ဂုန်မော်နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
Posted by OVERSEAS KACHIN ASSOCIATION at 10:10 PM No comments:
PRESS RELEASE : U.S. Embassy Rangoon
07-20-2012 Amb Statement on $3M FFP Donation
Posted by OVERSEAS KACHIN ASSOCIATION at 1:49 PM No comments:
ဖက်စစ်ဗမာကိုလိုနီလက်ထက် ကချင်လူမျိုးတို့ ၏ဘ၀
နေ၀င်း ခေတ် ၁၉၆၂ - ၁၉၈၉ (၂၇နှစ်) အတွင်း Burmese Army - KIA တိုက်ပွဲ အကြိမ်ပေါင်း -
၁လ ၇င်ဆိုင်တိုက်ပွဲ ၂ကြိမ်(ပျမ်းမျ) x ၁၂လ(တနှစ်) = ၂၄ကြိမ်
၂၇နှစ် x ၂၄ကြိမ် = ၆၄၈ကြိမ်
မင်းအောင်လှိုင် + သိန်းစိန် (၂ယောက်ပေါင်း) လက်ထက် ကချင်မျိုးဖြုတ်စစ်ဆင်ေ၇း (၁)နှစ်အတွင်း
9 June 2011 –9June 2012 အတွင်း Burmese Army – KIA တိုက်ပွဲ
တနှစ်အတွင်း အကြိမ်ပေါင်း- ၁၆၀၀ကြိမ်
ကချင်လူမျိုးတွေ၇ဲ့ ခေါင်းကိုနင်းထားပြီး အညံ့ခံဖို့ ခြိမ်းချောက်နေတာ အနှစ်(၅၀) ရှိပြီ၊ ၇ပ်တန်းက၇ပ် သင့်ပြီ။
မင်းအောင်လှိုင် + သိန်းစိန် အနေနဲ့ကချင်မျိုးဖြုတ်စစ်ဆင်ေ၇း ကိုမ၇ပ်ဖူးဆို၇င် ဖြစ်လာမည့် ကြောက် စ၇ာကောင်းတဲ့ သွေးချောင်းစီး တိုက်ခိုက်သတ်ဖြတ်မှုတွေအတွက် မင်းအောင်လှိုင် + သိန်းစိန် နှစ်ယောက် စလုံးအနေနဲ့လုံးဝတာဝန်ယူ၇မှာဖြစ်ပါတယ်။
KIA အနေနဲ့Cease Fire အတွက်တကယ်ဆန္ဒရှိ၇င် ထိုးစစ်ဆင်ထားတဲ့ ဗမာတပ်တွေကို ပြန်လည်နေ၇ာ ချဖို့2012 January – June (၆လ)အတွင်း အစိုး၇ကိုယ်စားလှယ်တွေက တဆင့် ၃ကြိမ်တိုင် တောင်းဆို ခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။
ပုရွက်ဆိတ်ကို "ဆင်" လို့လူတွေယုံအောင်ဟောပြောနိုင်တဲ့ သိန်းစိန်ဟာ ဗမာလူမျိုးတွေအတွက် ဒီမို ကေ၇စီ ဖခင်ကြီး ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်....ကချင်လူမျိုးတွေအတွက်တော့ ဘီလူးပါ။
ဗမာတပ်မတော်တခုထဲရှိ၇မယ် ဆိုတာနားထောင်လို့ တော့ကောင်းပါတယ်..ကချင်တွေအတွက်တော့ ဘီလူးသဘက်တွေဘဲ။
Posted by OVERSEAS KACHIN ASSOCIATION at 5:58 PM No comments:
ABC World News Now: Microsoft Surface Tablet: First Look
ဒီအတွက် အက်ပဲလ် ရဲ့ လက်ရှိ အရောင်းရဆုံး iPad လက်ကိုင် ကွန်ပြူတာကို အတိအကျ စိန်ခေါ် တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ Surface တက်ဘလက်တွေမှာ မိုက်ကရိုဆော့ဖ်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် ထုတ် office ပရိုဂရမ်တွေနဲ့ photoshop တို့ကိုပါ အသုံးပြုနိုင်မှာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
ဆားဖေ့စ် တက်ဘလက်ဟာ ဒေါင့်ဖြတ် မျက်နှာပြင်အကျယ် ၁၀.၆ လက်မ ရှိမှာ ဖြစ်ပြီး၊ မဂနီဆီယမ် အိမ်ထဲ ထည့်သွင်း ပြုလုပ်ထားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီမှာတော့ အရင် windows အတွက် ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲ တွေကိုလည်း ထည့်သွင်း အသုံးပြု နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
တချို့ပရိုဂရမ်တွေ ကတော့ surface နဲ့ လိုက်လျောညီထွေ ဖြစ်ဖို့ update လုပ်ပြီးမှ သုံးလို့ရမှာဖြစ်ပါ တယ်။
Intel processor အသုံးပြုထားတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် iPad ထက် အနည်းငယ် ပိုလေးမှာ ဖြစ်ပြီး၊ မျက်နှာပြင် ကတော့ iPad ထက် ပိုကျယ်မှာပါ။
Intel သုံးထားတဲ့ တက်ဘလက် အတွက် ကတော့ ပမာဏ ၆၄ နဲ့ ၁၂၈ gigabytes တို့ ရှိကြမှာ ဖြစ်ပါ တယ်။
မူရင်း – ဘီဘီစီ အသံလွှင့်ဌာန http://www.bbc.co.uk/burmese/
5 consequences from the drought that’s scorching A...
That empty feeling: Inside Myanmar's forbidden cap...
ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး အကျိုးခံစားရသူများနှင့် မခံစား...
Myanmar Times: KIA ၏ ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်...
လွှတ်တော်ထဲမှာ ဦးတင်အောင်မြင့်ဦး နဲ့ ဦးမြင့်ဆွေဘယ်သ...
KBC Ginjaw kaw na Hpung masha ni de sanglang shana...
RFA: No End To Kachin Fighting
KIO နှင့် အပစ်အခတ်၇ပ်စဲေ၇းဖြစ်ဖို့ စစ်တပ်က အခ၇ာကျတယ်
Senators upset US firms can invest in Myanmar's MOGE
Memoir: Kachin Peace Efforts 1963 - 1994
DEMOCRACY IMPLICATIONS OF AUNG SAN SUU KYI’S EUROP...
Lifting sanctions more difficult than imposing san...
ဂျူလိုင်(၁)၇က် ကချင်ပြည်တွင်း သတင်း
မျှော်လင့်လျှက်ပါ ၅၀၀၀ တန်ရယ်